महँगा हिरो- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २५, २०७५ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — चर्चाले कलाकारको पारिश्रमिकमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने गर्छ । ‘भर्चुअल सोसाइटी’ को अहिलेको जमानामा सामाजिक सञ्जालमा देखिने कलाकारको फ्यान फलोइङ र उसका कामले सिर्जना गर्ने ट्रेन्डिङले सेलिब्रिटी निर्धारण गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्ष नेपाली फिल्मका हिरो/हिरोइनको क्रेज पनि बढ्दो छ ।
जसको प्रतिछाया उनीहरूले लिने पारिश्रमिकमा देखिने गरेको छ । जबकी कुनै बेला राजेश हमालको रजगज चल्दा पनि उनले पारिश्रमिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ बढाएनन्, बरु धेरैभन्दा धेरै फिल्ममा खेलिदिए । यतिबेला हिरो, हिरोइनमा हतारिएर फिल्म नखेल्ने र खेल्दा मोटै रकम लिने ‘ट्रेन्ड’ बढ्दो छ ।
अनमोल केसी (रु. ३०–३५ लाख)
‘होस्टेल’ फिल्मबाट नायकमा डेब्यु गरेका अनमोल यसबीचको पाँचवर्षे करिअरमा नेपाली फिल्म क्षेत्रकै सर्वाधिक महँगा कलाकार दरिएका छन् । स्वयं अनमोल भने सामाजिक सञ्जालमा उतिसारो सक्रिय छैनन् । फेसबुक, ट्वीटरमा उनका भेरिफाइट अकाउन्ट नभए पनि फेक अकाउन्ट बनाएर लाइक्स बटुल्नेको बाढी छ । अनमोल केसीको नाममा खोलिएको एक पेजमा ३ लाख २४ हजार फलोअर्सदेखि एक लाख कटेका नै उनका नामका तीन वटा फेक पेजहरू छन् । इन्स्टाग्राममा उनका दुई लाख बढि फलोअर्स छन् ।
अनमोलले ‘कृ’ मा त्यसताकाको सर्वाधिक २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको खबरले सनसनी मच्चाएको थियो । त्यसपछि प्रतिस्पर्धी कलाकारले पनि आफ्नो रेटमा वृद्धि गरे । यतिबेला निर्देशक मिलन चाम्सको ‘ब्याचलर बन्टी’ र झरना थापाको ‘ए मेरो हजुर ३’ मा अनमोल अनुबन्धित छन् । ‘ब्याचलर बन्टी’ मा ३०–३५ लाख रुपैयाँ लिएका अनमोलले थापाको
फिल्मलाई पनि उस्तै रकम लिएको बताइन्छ ।
अनमोल स्टारडमलाई टिकाइरहन सकेकैले महँगा कलाकारमा निरन्तर दरिन सकेको बताइन्छ । खासगरी टिनएजर्समाझ चर्चित उनका फिल्मले सुरुआतमा देखिएको हाउसफुलले व्यापारको ल्याकत राख्छन् । ‘अनमोलसँग जो निर्माता पनि फिल्म बनाउन लालायित हुन्छन्,’ निर्देशक झरनाले भनिन्, ‘उसको फ्यान फलोइङ, स्टारडमले गर्दा पनि उसमा गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
अर्का निर्देशक मिलन पनि अभिनय सुधार्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि अनमोलको मिहिनेती स्वभाव, हतपत नखुल्ने, चकलेटी अनुहार, केटी फ्यानले गर्दा उनलाई सर्वाधिक रकम तिर्न निर्माताहरू इच्छुक देखिएको ठान्छन् ।
प्रदीप खड्का (रु. २२ लाख)
रियालिटी शो ‘खोजी प्रतिभाको’ मार्फत अभिनयमा आएका प्रदीपले ‘इश्केप’ बाट डेब्यु गरेका भए पनि त्यसमा उनी खासै नोटिस भएनन् । ‘प्रेमगीत’ ले उनको उचाइ एकाएक चुल्यायो । एकातिर चकलेटी हिरोबाट आर्यन सिग्देलको क्रेज सेलाउँदै जानु र विकल्पमा प्रदीपको उदय हुनु लगभग एकै समय हो ।
निर्देशक मिलन चाम्सकै फिल्म ‘लिलिबिली’ मा उनी १५ लाख रुपैयाँसहित म्यानमार, बर्मा र बैंककको प्रदर्शन अधिकार लिएर अनुबन्धित भएपछि ‘कृ’ मा २० लाख रुपैयाँ लिएका अनमोलको भन्दा धेरै रकम भनेरसमेत प्रचारबाजी भयो । यतिबेला उनी उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशन रहने ‘लभ स्टेसन’ मा पनि मोटै रकम लिएर खेल्न राजी भएको बताइन्छ ।
चकलेटी अनुहार, मीठो मुस्कान, सर्लक्क र फूर्तिलो जीउडाल प्रदीपको आवरणका विशेषता हुन् भने अभिनयमा पनि राम्रा कलाकार हुनु समकक्षीमाझ उनको पृथक् विशेषता बनिरहेको छ । उनका फिल्मले पनि प्रारम्भिक व्यापार गर्नुमा प्रदीपकै स्टारडम र ठूलो फ्यान सर्कल रहेको पुष्टि गर्छ । ‘लिलिबिली’ मा सँगै काम गरेका मिलन चाम्सले प्रदीपको अभिनयलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै भन्छन्, ‘खासगरी उसमा आफ्नो फिल्मको सही प्रमोसन गर्न र कसरी हाइप बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ । ऊ कतिपय कलाकार जस्तो नखरा पार्ने खालको छैन । एकदम सहज छन् ।’
पल शाह (रु. १५ लाख)
राजेश हमाल, विराज भट्ट वा निखिल उप्रेतीको जगजगी छँदा फिल्ममा ‘एक्सन ट्रेन्ड’ हाबी थियो । जति धेरै फाइट उति धेरै हिट भनेझैं अवस्था थियो । त्यसमा पनि एक मुक्काले दस जनालाई ढलाउन सक्ने हमालको मुक्का वा स्टन्ट देखाएरै दर्शक चकित पार्ने उप्रेतीको शैली अहिलेको स्वादमा पर्दैन । बरु लभस्टोरी फिल्म र कोरियन लुक्सका हिरो/हिरोइन अहिले चल्तीमा छन् । त्यसैले पनि पल शाह उच्च माग रहेका कलाकारमा तेस्रोमा आउँछन् । उनको फिल्म छ्यापछ्याप्ती भने छैन ।
एक टीभीमा भिजुअल इडिटरका रूपमा काम गर्दागर्दै म्युजिक भिडियो खेल्न पुगेका पललाई पछि विकास आचार्यले ‘नाई नभन्नु ल ४’ मा खेलाए । त्यसपछि सुदर्शन थापाले ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बाट हाइप दिलाए । पलले त्यसपछि आफ्नो भाउ यतिसम्म बढाइदिए कि स्वयं सुदर्शनले नै निर्माण घोषणा गरिसकिएको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को सिक्वेलमा पललाई अनुबन्ध गर्न नै सकेनन् । स्रोतका अनुसार सिक्वेलका लागि उनले १५ लाख रुपैयाँको माग गरेका थिए । तर त्यसपछि पलको ‘जोनी जेन्टलम्यान’ फ्लप भयो भने मल्टिस्टारर भएकैले ‘शत्रु गते’ चल्दा पनि त्यसको जश एक्लैले पाएनन् । यतिबेला पलले बरु फिल्म खेलेका छैनन्, तर आफ्नो भाउ पनि घटाएका छैनन् ।
टिनएजर्स दर्शकमाझ पलको छवि पनि राम्रो छ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ले उनलाई लभर–ब्वाईका रूपमा स्थापित गरिदियो भने ठीकठाकको अभिनय र नृत्यमा केही सिपालु भएकैले पललाई मन पराउनेको संख्या पनि ठूलो छ । जसले गर्दा फिल्म निर्माता उनलाई मोटै रकम दिएर भए पनि अनुबन्ध गराउन चाहन्छन् ।
दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपिन कार्की (रु. १०–१५ लाख)
यी तीनै जना कलाकार हिरो कम अभिनेता ज्यादा हुन् । र, सबैको पृष्ठभूमि रंगमञ्च हो । रंगकर्मीलाई फिल्मकर्मीहरू ‘नाटक बढी गर्छ’ भनेर होच्याउने परिपाटीमा दयाहाङ, सौगात र विपिनको फिल्ममा आगमनले रोकियो । जीवन्त र यथार्थपरक अभिनय शैलीको अनुशरणले नै उनीहरूलाई ‘हिरो जोन’ भन्दा बाहिरको ठूलो दर्शक घेरामाझ लोकप्रिय बनायो ।
राम्रो कलाकार भनेर पछ्याउने यिनका फ्यानले समेत पछिल्लो समय दयाहाङ, सौगातहरू राम्रो फिल्मका लागि भन्दा राम्रो पैसाका लागि फिल्म खेल्न थालेको भन्दै आलोचना गर्छन् । तर अझै पनि दयाहाङ, सौगातलाई ८ देखि १० लाख रुपैयाँमा फिल्म खेलाउन चाहने निर्माताको लामो लर्को नै छ । ‘पशुपति प्रसाद’ र ‘जात्रा’ ले एकाएक लाइमलाइटमा ल्याएका विपिनले सौगात र दयाहाङ जस्तो बग्रेल्ती फिल्म नखेले पनि पछिल्लो ‘प्रसाद’ बाट भने १५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएका थिए । फिल्मका निर्देशक दिनेश राउतले भने उक्त रकम आफूहरूले विपिनका लागि भन्दा पनि आफ्नो पात्रका लागि लगानी गरेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘हो, त्यो पात्रलाई विपिनले बाहेक अन्य कलाकारले सायदै न्याय गर्न सक्थे होलान् ।
हामीलाई उनी नै चाहिने थियो । त्यसैले मागअनुसारको रकम दिएका हौं ।’ त्यसो त अरू फिल्ममा पनि विपिनले यही दरभाउ चलाउलान् भन्नचाहिँ नसकिएला ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १०:५०